Ọnụ ọgụgụ kasị elu na nnụnnụ ọhịa Unlimited | Martech Zone
N'ime izu 60 awa na-arụ ọrụ n'ime izu ole na ole gara aga, ọ bụ ihe ịma aka ịgbakwunye 20 ma ọ bụ 30 ọzọ na ọrụ nkewa m na-eme maka Nnụnnụ Na-enweghị Anụmanụ. N'echi, nnukwu ụbọchị, mgbe WBU gosipụtara ụfọdụ n'ime aha ya.
Anyị afanyela ọtụtụ ọrụ na saịtị a, anyị na-atụ anya ịme ọtụtụ ihe. Enwere ezigbo nchịkwa nchịkwa ebe ụlọ ahịa nwere ike imelite ozi nke aka ha ma ọ bụ tọọ ọnọdụ ala ha. Fọdụ atụmatụ ndị ọzọ:
Mpaghara GeoIP na-ekpebi ma ọ ga-egosipụta na metric ma ọ bụ ọkọlọtọ. The GeoIP na-ebu amụma banyere ọnọdụ na mpaghara gị wee kpaa nkata na maapụ dabere na adreesị IP na-arịọ ka ibe ahụ.
Windows windo ozi bụ ngwakọta. Ọ bụrụ na pịa na eserese ngosi, ha sitere na faịlụ KML. Ọ bụrụ na ị pịa na ọnọdụ ndị dị na sidebar, ha mara na a oyi akwa ikwu na map.
A na-esonye ntuziaka, ọ bụrụ na ịnyekwuo adreesị karịa naanị steeti ma ọ bụ mpaghara. Nke a bụ oge mbụ ebugoro m ntuziaka Google, mana ọ mara ezigbo mma. Otu ihe iji mara note Adịghị m enyefe adreesị na geocode, naanị m na-agbakwunye ohere na ịdị ogologo ma jiri aha kpuchie ha (Lee @ 43, -120).
Enweela onyogho na windo ozi ahụ, mana anyị enweghị onyonyo ọ bụla echekwara n'oge a. Otu nzọụkwụ n'otu oge. Ọ bụrụ n’ịchọ ile anya, ị nwere ike ịga leta Nnụnnụ Ugbo Nnukwu Unlimited Maps. Aga m ekwupụta na sọftụwia ahụ bụ Alfa dị njikere ịga Beta ozugbo anyị natara arịrịọ mmezi nke ndị ahịa.
Special ekele Stephen, ọ meela m intern na nke a na mere a otutu nke a ọrụ. Ọ kwagara Germany maka afọ akwụkwọ mana m na-atụ anya ịnọgide na-etinye koodu ya na ọrụ a. WBU bụ nzukọ dị egwu ma nwee ọ joyụ iso ya rụọ ọrụ. Anyị na-atụ anya inyefebiga ọrụ a karịa ka anyị nwere olile anya itinye ngwa a maka ndị otu ndị ọzọ na-achọ ngwa Maapụ PHP. Stephen ga-abụ onye m na-azụ ahịa… ọ bụghị ihe ọjọọ maka nwa okorobịa ka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị!
Additionalfọdụ ndị ọzọ akụ ndidi Mike si koodu atụ yana Ben, a Mmepụta na Onwuka onye wuru ihe ngosi di egwu nke Google Maps na Fanim.
Tags: ntụziakagoogle maapi apinkewamapchọta ụlọ ahịaechekwa ụlọ
Dị Mkpa karịa iPhone?
Sep 13, 2007 na 5: 03 AM
Ndewo ebe Doug - ekele gị na ndị mmepe ndị ọzọ na ịmechara ọrụ a - ejiri m n'aka na ndị nwe ụlọ ahịa WBU ga-enwe ekele maka nke a. Ọtụtụ ndị ahịa ha (yana ndị nwere ụlọ ahịa nwere mmasị ịzụta aha) na-achọta nnụnnụ ọhịa na-akparaghị ókè site na Weebụ, na-eme ka ọ dị mkpa na ahụmịhe mbụ ha na ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ nke dị mma. Ihe mmeputa ohuru ohuru doro anya bu oganihu di na map ndi mbu. Nwere olile anya na nke a ga - ewetara gị azụmaahịa ọhụrụ - ị ga - arụ nnukwu ọrụ ọzọ.
Sep 13, 2007 na 9: 21 AM
Nke a doro anya na-amalite isi n'ime zuru siwing. Daalụ maka ime ka m pụọ iche na ya. Ọ na-atọ ụtọ mgbe niile.
Sep 13, 2007 na 9:06 PM
Enweghị m ike ịgwa gị otú masịrị ụmụ nnụnnụ Unlimited franchisees bụ ndị nwetara ọnụ ọgụgụ dị elu nke taa! Ọ bụghị iwu na nnọkọ anyị mana m jụrụ maka nkeji ole na ole na mbido ụbọchị iji gosi ya. Ozugbo ahụ, ha ghọtara mgbanwe dị egwu nke onye nwe ụlọ ahịa anyị dị ugbu a. Obi dị ha ezigbo ụtọ na arụmọrụ ọrụ ịnya ụgbọ ala.
Doug, i nwewo obi uto iso oru. Onye ọ bụla nọ ebe ahụ na-achọ onye nrụpụta nwere ọgụgụ isi, raara onwe ya nye na onye ahịa enweghị ike ịgahie gị! Daalụ maka ịrụsi ọrụ ike niile na ekele ndị otu gị. Umu ebe unu na eme m nma.
Nnụnnụ Ugbo Unlimited, Inc.